Robert Lewandowski oo usii goodiyay arsenal
Home Sports Robert Lewandowski oo usii goodiyay arsenal
Robert Lewandowski ayaa aaminsan in Bayern Munich ay afka qaban karto Arsenal kulankooda Champions League wareegiisa 16ka oo ay habeen danbe isku qaban doonaan garoonka Allienza Arena.
Kooxda daafacaneysa horyaalka Germany ayaa markale qabili doonto kooxda Premier League laakin kooxda Die Roten lagu naaneeso ayaana ku jirin qaab ciyaareedkooda caadiga ah iyagoo kulanoodii ugu danbeeyay ay si dirqi ah kaga adkaadeen kooxda ku dhibaatooneysa Bundesliga ee Ingolstadt oo ay kaga adkaadeen 2-0.
Lewandowski oo ka hadlayay muhiimada uu leeyahay kulanka ay la ciyaarayaan kooxda macalin Arsene Wenger ayaa yiri “Guushii aan ka gaarnay Ingolstadt wuxuu ahaa mid aad muhiim u ah, haatan waxaan diirada ku heynaa Champions League”.
“Qof waliba wuxuu sugayaa kulankaan, waxay noo noqon doontaa tartan weyn, waxaan rajeynayaa inaan u ciyaarno si fiican oo aan la imaano qaab ciyaareed fiican maadaama aan ku ciyaareyno Munich.
“Arsenal waxay heysataa ciyaartooy tayo sare leh, wey og yihiin waxa ay la macno tahay in la ciyaaro Champions League”.
“Waxaan u baahanahay inaan diirada saarno nafteena, hadii aan ciyaarno kulankeena caadiga ah, malaha Arsenal ma heli doonto fursad ay ku ciyaarto, waa inaan si wanaagsan kubada uga soo dhisno min daafac ilaa weerarka”.
Bayern ayaa ka ciribtirtay Gunners sadex kamid ah afartii Champions League ee ugu danbeysay iyadoo Bavarians mar kamid ah ay qaadeen tartankaasi waana xili ciyaareedkii 2012-13 markaasoo ay qaaden sadexda koob.